← ကဏ္ဍ:တမ်းပလိတ်တွင်းရှိ ရက်စွဲပါရာမီတာမမှန်သော ဆောင်းပါးများ
၃ ဇွန် ၂၀၂၀ ၀၀:၅၈ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
သင်္ဂါယနာ‎ ၀၁:၅၉ -၃‎ ‎USUMANA ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎စတုတ္ထအကြိမ်သင်္ဂါနာတင်ခြင်း: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
သင်္ဂါယနာ‎ ၀၁:၅၃ -၆၉‎ ‎USUMANA ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎စတုတ္ထအကြိမ်သင်္ဂါနာတင်ခြင်း စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
အရေးမကြီး စေတနာ့လူငယ်များ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၆:၀၇ +၁၅၆‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မှတ်တမ်း ၁၁:၅၀ စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း စာမျက်နှာကို စေတနာ့လူငယ်များ၏ ချီတက်ခြင်း သို့ Shin Khant Maung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် ‎(သင့်လျော်သည်ဟု ထင်)
အရေးမကြီး စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၄၈ +၂၃‎ ‎Shin Khant Maung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲ: Visual edit: Switched
ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်‎ ၀၄:၅၆ +၁၀၆၅‎ ‎Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ "အခြားဖတ်ရှုရန်" အပိုင်းကိုထည့်ပါသည်။
ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်‎ ၀၄:၂၄ +၅၈၄၇‎ ‎Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Added GitHub usage statistics introduction.
အသစ် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်‎ ၁၇:၅၉ +၅၉၈၇‎ ‎Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Content in this edit is from the existing English Wikipedia article at en:GitHub; see its history for attribution.
အရေးမကြီး စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၀၆:၄၆ +၂၃‎ ‎Shin Khant Maung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎External links
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၀၆:၃၁ +၁၇‎ ‎103.134.205.47 ဆွေးနွေး‎
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၀၆:၂၁ -၁၄၈၈၉‎ ‎103.134.205.47 ဆွေးနွေး‎ fix rough translation (Don't make rough translation in national anthem articles. please!)
အရေးမကြီး စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၇:၀၃ +၂၁‎ ‎Shin Khant Maung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Rough translation
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၃၉ +၄၉၄‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၃၂ +၅၃‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၃၁ +၃၉‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၂၇ +၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၂၆ +၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၂၅ +၇၄‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၂၂ +၃၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၂၂ +၄၂‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၂၁ +၂၄‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၁၇ +၂၇‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၁၃ +၂၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၁၀ +၇‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၀၈ +၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၃:၀၇ +၁၁၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၂:၅၈ -၄၄‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၂:၅၆ -၁၃၇‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၂:၄၉ -၈၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၂:၄၆ -၁၁၈‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၂:၃၈ -၁၅၂‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၄၅ -၇၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၄၄ +၁၀၇‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၄၁ +၃၀၁‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၃၉ +၁၅‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၃၀ -၃၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၂၆ -၂၈၅‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၁:၁၉ -၁၇၄‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၄၀ -၁၃၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၃၄ -၇၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မူရင်းမူကွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၃၂ +၁၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၂၈ -၆‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၂၈ +၆‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၂၇ +၉၆၃၂‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ "March of the Volunteers" စာမျက်နှာကို ဘာသာပြန်ရင်း ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: ContentTranslation ContentTranslation2
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၂၅ +၁၇၀၅‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ "March of the Volunteers" စာမျက်နှာကို ဘာသာပြန်ရင်း ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: ContentTranslation ContentTranslation2
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၂၁ +၄၇၄၃‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ "March of the Volunteers" စာမျက်နှာကို ဘာသာပြန်ရင်း ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: ContentTranslation ContentTranslation2
စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၁၂ +၁၀၁၀၂‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ "March of the Volunteers" စာမျက်နှာကို ဘာသာပြန်ရင်း ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: ContentTranslation ContentTranslation2
အသစ် စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ခြင်း‎ ၁၀:၀၇ +၄၂၃၀‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ "March of the Volunteers" စာမျက်နှာကို ဘာသာပြန်ရင်း ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: ContentTranslation ContentTranslation2
ဖူကျန့်ပြည်နယ်‎ ၀၅:၅၄ -၃‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
ဖူကျန့်ပြည်နယ်‎ ၀၅:၅၀ -၂၃‎ ‎Thado Thiri ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ် အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/ကဏ္ဍ:တမ်းပလိတ်တွင်းရှိ_ရက်စွဲပါရာမီတာမမှန်သော_ဆောင်းပါးများ" မှ ရယူရန်